बजार  BikashNews
६ अर्ब ११ करोडमा रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, एनएमबी बैंक मुख्य लगानी कर्ता
२०७३ साउन १३ गते ६:३०
कठमाडौं, १३ साउन । ६ अर्ब ११ करोडको लागतमा रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट उद्योग स्थापना हुने भएको छ । शंकर ग्रुप र अम्बे समुहको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट उद्योगमा १० वटा बैंकहरुले...
साझाका नयाँ ३० वटा बस ल्याउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा, अपांग मैत्री सेवा दिइने
२०७३ साउन १३ गते ४:४५
काठमाडौँ, १३ साउन । साझा यातायातले थप ल्याउन लागेका तीस बसको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।काठमाडौँ महानगरपालिकाको १० करोड सेयर लगानीमा साझाले भारतबाट ल्याउन लागेका थप नयाँ तीन बस निर्माण भइसकेको र अबको...
प्रान्तलाई अधिकार सम्पन्न बनाउदै विद्युत् ऐन संशोधन हुँदै, स्थानीयलाई २० युनिट बिजुली सित्तैमा दिने प्रस्ताव
२०७३ साउन १२ गते १४:१९
काठमाडौं, १२ साउन । सरकारले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा जटिलता थपिँदै गएपछि विद्युत् ऐन २०४९ को संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अद्यावधिक ऐनमा देखिएका जटिलताहरुलाई हटाएर सङ्घीय संरचना अनुसार प्रान्तलाई समावेश गरी...
लगानी बोर्डको सदस्यमा सिएनआई अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा नियुक्त
२०७३ साउन १२ गते १०:१७
काठमाडौं, १२ साउन । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) का अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा नेपाल लगानी बोर्डको सदस्यमा नियुक्त भएका छन् । लगानी बोर्डको हालै बसेको बैठकबाट उनी उक्त बोर्डको सदस्यमा नियुक्त भएका हुन् । परिसंघका...
४४ करोड मूल्य बराबरको परिवार नियोजनका साधन आयात, २६ करोडको कण्डम मात्र
२०७३ साउन १२ गते ३:५१
काठमाडौं, १२ साउन । परिवार नियोजनका अस्थायी साधनहरुको प्रयोग बढेको छ । नेपालीले एकै बर्ष ४४ करोड ८४ लाख रुपैंयाँका त्यस्तो साधन प्रयोग गरेका छन् । त्यसमा पुरुषले २६ करोड १५ लाख रुपैंयाँ बराबरका...
स्कोडाको नयाँ कार १५ मिनेट चार्ज गरेर ४ सय ८२ किलो मिटर चल्ने कार !
२०७३ साउन ११ गते १५:५३
काठमाडौं, ११ साउन। यदि तपाइँलाई कार चढ्दा पेट्रोल वा डिजेल खर्च भएको देखेर दिक्क लागेको छ भने चिन्ता छोड्नुस् । अव पेट्रोल र डिजेल खर्च नगरी घन्टौं घन्टा यात्रा गर्न सकिन्छ । कार कम्पनी...
सेम्टेम्बरमा अाउन लागेको आईफोन ७ मा के छ ? यस्ता छन् मनै लोभ्याउने फिचर
२०७३ साउन ११ गते १५:३३
काठमाडौं, ११ साउन। आउँदो सेम्टेम्बरमा एप्पलको बहुप्रतिक्षित फोन आईफोन ७ र आईफोन ७ प्लस बजार आउँदैछ। निकै व्यग्रताकासाथ प्रतिक्षा गरिएको यी फोनमा हुन सक्ने फिचरका बारेमा पनि बजारमा अनेक चर्चा र अडकलबाजी चलिरहेको छ। के कस्ता...
१० वटा नयाँ शहरको निर्माणका लागि एकिकृत विकास मस्यौदा तयार, प्रत्येक शहर निर्माण गर्न ८ देखि १० अर्ब चाहिने
२०७३ साउन ११ गते १४:५०
काठमाडौं, ११ साउन । सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गको विभिन्न १० स्थानमा आधुनिक सुविधासहित विकास गर्न लागेको नयाँ १० शहर स्थापना कार्य अघि बढेकोे छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग (पुष्पलाल लोकमार्ग) र उत्तर–दक्षिण सडक करिडोरको नजीक पर्नेगरी...
जियोनिले ल्यायो एफ १०३ प्रो, यस्तो छ मोवाईल सेटका फिचर
२०७३ साउन ११ गते १४:३६
काठमाडौं, ११ साउन । जियोनिले नेपाली बजारमा नयाँ मोडेल जियोनि एफ १०३ प्रो ल्याएको छ । नेपालमा अत्यधिक रुचाईएको एफ १०३ को नयाँ संस्करण एफ १०३ प्रो सेल्फी खिच्न रुचाउने नेपाली युवा जमातमा लक्षित...
डाट्सुन रेडी गो कार नेपाली बजारमा, १३ लाख ९९ हजार मूल्य
२०७३ साउन ११ गते १०:१०
काठमाडौं, ११ साउन । डाट्सुनको रेडी गो कार नेपाली बजारमा भित्रिएको छ । साधारण आम्दानी भएका नेपालीहरुलाई समेत कार चढ्ने अवसर प्रदान गर्न भन्दै डाट्सुनको रेडी गो कार नेपाली बजारमा भित्र्याएको पायोनियर मोटो कर्पका...
« अघिल्ला 1 … 544 545 546 547 548 … 570 पछिल्ला »